Psychology na di na nwunye - Bezzia | Bezzia
Psychology na di na nwunye
Womenmụ nwanyị na-etinye ọdịdị dị elu dị oke mkpa, n'ihi na na mgbakwunye na ahụike na ahụike siri ike, ha na-enwe mmasị ile anya mara mma. Mana oge ụfọdụ, ha nwere ike ịdị nsogbu dị n'ime nke na - eme ka ụwa dum mmadụ bi daa: nsogbu na ndị nne na nna, ya na onye ọlụlụ, na ọmụmụ ihe, njirimara ma ọ bụ omume.
Ya mere, anyị mepụtara ngalaba maka isiokwu ndị a, Psychology na Di na Nwunye, ndị ga-anwa inyere ụmụ agbọghọ ndị nwere nsogbu ndị a aka, na-eme ka anyị hụ ihe ndị ọ ga-abụ na anyị ahụghị mbụ. Ọ bụ ezie na-eme ka o doo anya na anyị abụghị ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ọ bụrụ na ị na-arịa ajọ nsogbu ị ga-agakwuru ụdị ọkachamara a, na Bezzia anyị ga-enye gị ndụmọdụ ga-enyere gị aka iche ụdị ọnọdụ a ihu.
Anyị ga-agakwa nsogbu ndị a site na ọnọdụ dị mma: na-ekwu maka otu esi eme ka ezinụlọ anyị nwee mmekọrịta ma ọ bụ otu esi egosipụta nka aghụghọ. You nwere mmasị?
Nkwenye mmekọahụ na di na nwunye
por Maria José Roldan eme Ụbọchị 2 .
Mkparịta ụka na mkparịta ụka na-adị mkpa mgbe a na-ekwu maka di na nwunye ma ọ bụ mmekọrịta. Ọ bụrụ…
Gịnị bụ ekweghị ekwe
por Maria José Roldan eme Ụbọchị 6 .
N'oge a, onye na-enweghị mkpanaka dị ụkọ. Daalụ maka ya, ọ dị mfe ịnweta ...
Ihe na -egosi na mmadụ hụrụ ya n'anya
por Maria José Roldan eme Ụbọchị 7 .
Ịhụnanya bụ ihe a na -atụghị anya ya nke ukwuu na onye ọ bụla na -emeghachi omume na ya n'ụzọ dị iche. N'agbanyeghị na ọ nwere ike ịbụ ihe ...
Otu esi egosi ịhụnanya nye onye gị na ya na -emekọ ihe
por Maria José Roldan eme 1 izu .
Inwe ike igosi di na nwunye ịhụnanya dị mkpa mgbe ihe niile na -arụ ọrụ yana na ...
Ụjọ egwu ma ọ bụ ụjọ: Otu esi emeri ya
por Susana godoy eme 1 izu .
Ụjọ egwu ma ọ bụ ụjọ bụ ihe ọtụtụ mmadụ nwere, ọ naghị adịrị ha mfe ihu ya….
Nsonaazụ nke imebi nkwa n'ime di na nwunye
por Maria José Roldan eme 2 izu .
Nkwa dị mfe ma dị mfe, agbanyeghị nsogbu na -ebilite mgbe ha dara na ntị ntị chiri ma ọ bụghị ...
Owu na -eso di na nwunye ahụ
N'ezie, ị nụla ihe karịrị otu ugboro maka nkebi ahịrịokwu a: "Ọ ka mma ịnọ naanị gị karịa gị na ndị ọjọọ." Site na…
Ịgba alụkwaghịm nwere ike ịdị ka ọnwụ na dịka nke a, ị ga -agafe usoro iru uju iji merie ...
Anụ ụlọ dị ka otu n'ime nnukwu nkwado mmụọ
por Susana godoy eme 2 izu .
Ha bụ ndị ama ama na ndụ anyị kamakwa ahụike anyị. N'ihi na anụ ụlọ aghọwo otu ...
Gịnị bụ ịhụnanya na -akụda mmụọ?
por Maria José Roldan eme 3 izu .
Ịhụnanya na -akụda mmụọ bụ ụdị nzuzu nke otu n'ime ndị otu nọ na -enwe nsogbu ...
Otu esi abụ onye mmekọ na -adịgide adịgide
Inweta mmekọrịta ga -adịte aka oge abụghị ihe dị mfe iru na nke ahụ chọrọ ...
Ọkpụkpụ ma ọ bụ genital ọcha
Ere ọgwụ mgbochi ịmụ nwa: uru na ọghọm ya
Mgbochi ọgwụ ịmụ nwa
Mgbe agụụ mmekọahụ funahụrụ ... kedu ihe ị ga-eme?
Ibe ákwá mgbe ị mechara ịhụnanya
Ihe ịrịba ama ndị na-egosi onye nweburu mgbaghara na ọ hapụrụ gị
Kedu mgbe onye na-ahụ n'anya na-aghọ di na nwunye?
Mkpụrụ ọgwụ na-achịkwa ịmụ nwa na-ewepụ agụụ mmekọahụ?
Enwere akara aka n'ịhụnanya?
Mgbe ezinulo m anabataghi onye ibe m